U-dabaaldegidda guusha cimri-dherer ee fanaaniinta iyo dhaqan-yaqaannada Minnesota
Mu'asasada McKnight waxay aad ugu faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inaan sii qoto dheeraynayno maalgalintayada fanaaniinta iyo dhaqamada sita kuwaas oo wax wayn ku soo kordhiyey bulshooyinka Minnesota. Abaalmarinta fanaaniinta sharafta leh waa hadda u furan magacaabista, iyadoo la kordhiyay abaal-marin $100,000. Korodhkani wuxuu xooga saarayaa sida ay nooga go'an tahay yoolkayaga barnaamijka-si aan u kicino hal-abuurka, awooda, iyo hogaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo dhaqan-yaqaannada.
Fanaaniinta iyo dhaqan-yaqaannada ayaa wakhtigan ina hogaaminaya. Faafida socota ayaa si gaar ah ugu adkeyd qaybta fanka, haddana, fannaaniinta iyo dhaqammada sidayaashu waxay ina tusaan dariiqii hore loogu socon lahaa - codkooda, hal-abuurkooda, iyo awooddooda inay nagu xidhaan dhammaanba bini'aadminimada la wadaago.
Waa wakhti Kor u kaca sanadkan ee $100,000 waxa uu ku yimid ka jawaabista codsiyo ka yimi gudigayada sharafta leh ee fanaaniinta, barayaasha, iyo xirfadlayaasha ururka fanka, kuwaas oo u doodayay taageero dheeraad ah fanaaniinta shaqeeya. Maalgelinta korodhay waxay la socotaa yoolka barnaamijka Fanka & Dhaqanka, kaas oo ujeedkiisu yahay in la sameeyo deeqo dhiirranaan, saameyn badan leh, deeqo cabbir sax ah oo dhan faylalka.
Muddo 40 sano ah, deeq-bixinta fanka ee McKnight waxay maalgelisay fannaaniinta shaqeeya iyo nidaamka deegaanka hal-abuurka muddada-dheer ee Minnesota. Abaalmarinta Farshaxannimada Sharafta leh, oo aqoonsata guusha nololeed ee fannaaniinta Minnesota, waxay billaabatay 1998-kii iyada oo la siiyay $40,000 abaal-marin sannadkii, taasoo isla markiiba kor u kacday $50,000. Tan iyo wakhtigaas, barnaamijku wuxuu siiyay in ka badan $1 milyan 24 fanaaniinta caanka ah ee Minnesota.
La qabsiga iyo qiimaynta. Guud ahaan samafalayaasha, aasaaska iyo la-hawlgalayaasha kale ee la aamini karo ayaa aqoonsanaya doorka korodhay ee fannaaniinta iyo hal-abuuradu ay ku leeyihiin tayeynta bulshooyinkeenna. Waxaan rajaynaynaa in maalgashigan la kordhiyey uu ku dhismi doono dadaallada maxalliga ah ee hadda socda oo lagu daydo maalgeliyayaasha kale baahida muhiimka ah ee lagu qiimaynayo fannaaniinta iyo dhaqan-bixiyeyaasha.
"McKnight, waxaan aaminsanahay in taageeridda fannaaniinta iyo dhaqammada sita ay la macno tahay maalgelinta adduunka mustaqbalka ee aan rabno inaan ku noolaanno."
Markaan nahay McKnight, waxaan aaminsanahay taageeridda fannaaniinta iyo dhaqammada sita inay la macno tahay maalgelinta adduunka mustaqbalka ee aan rabno inaan ku noolaanno. Waa waqtigii aan kobcin lahayn aqoonsigayada iyo maalgashiga fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa hiddaha u leh-siinta fannaaniinta taageerada ay u qalmaan si ay nolol u helaan. iyo nolol, iyo in bulshooyinkeenu ay ku horumaraan waxtarkooda.
Ku saabsan Abaalmarinta Farshaxanka Sharafta leh
Aqoonsiga fannaaniinta wax weyn ku soo kordhiyey nolosha dheer ee Minnesota, taasoo kobcinaysa bulshooyinkeenna. Abaalmarinta Farshaxannimada Sharafta leh ee $100,000 McKnight ee sannadlaha ah waxay aqoonsataa fannaaniinta sameeyay ballanqaad nololeed oo dhan si ay u abuuraan fan gudaha, gobol ahaan, iyo/ama heer qaran ah oo muhiim ah. Fanaaniintaani waxay doorteen inay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigaan Minnesota, taasoo ka dhigaysa gobolkeena meel hodan ku ah dhaqan ahaan. Ugu horrayn, waxay soo saareen farshaxan soo jiidasho leh oo ka tarjumaysa aragtidooda gaarka ah ee aan caadiga ahayn. Farshaxannada Sharafta leh ee McKnight ayaa sidoo kale dhiirigeliyay fannaaniinta kale, kasbadeen ammaanta daawadayaasha, macaamiisha, dhaleeceynta, iyo xirfadleyda fanka kale, qaarna waxay aasaaseen oo xoojiyeen ururrada fanka.
Ma taqaanaa farshaxan leh mihnad joogto ah oo aan caadi ahayn gudaha Minnesota? *Magacaabid la'aan. Abaalmarintu waa mid saameyn ku leh bulshadooda sidaas darteedna waxay u baahan tahay magacaabista.
Magacaabista waxay ku egtahay Abriil 25, 2022.
Ogsoonow: Codsiyada waxaa kaliya lagu aqbalaa internetka. Fadlan ha u dirin wax alaab ah oo DAA laxiriira xafiiska McKnight maadaama shaqaaluhu ay hada si fog uga shaqeynayaan Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid habka magacaabista, fadlan emayl u soo dir Maria Salas.